1.2.1. भनाइ राख्ने - Investigative Journalism Manual | Investigative Journalism Manual
> खण्ड > खण्ड आठ > 1.	स्टोरी कसरी लेख्ने > 1.2.1. भनाइ राख्ने
अरूको भनाइबाट पूरै स्टोरी बताउनुहुँदैन । निश्चित बुँदा भन्न, थप जानकारी दिनका लागि मात्र भनाइ राख्नुपर्छ । जुन भनाइ राख्दा आफूले भनिसकेका कुरा दोहोरिन्छ त्यस्तो भनाइ पनि राख्नुहुँदैन । सामान्य र तथ्यगत जानकारी दिनका लागि आफूले कुरा गरेका मानिसको भनाइ राख्नुहुँदैन । आफूले स्रोतसँग कुराकानी गरेको देखाउनका लागि भनाइ उपयोग गर्नुपर्छ तर उससँग जे विषयमा कुरा गरेको हो त्यसबारे रिपोर्टरले गर्नुपर्ने विश्लेषणका ठाउँमा भनाइ राख्नुहुँदैन ।
सबै भनाइ फलानाका हुन् भनी बताउनुपर्छ । आफैंले अवलोकन नगरेका केही पनि कुरा बताउँदा यो फलानाले बताएको हो भनी भन्नुपर्छ । यसरी कुनै पनि भनाइ फलानाले भनेको हो भनी बताउने मामलामा खोज पत्रकारले अरू पत्रकारले भन्दा पनि सतर्क हुनुपर्छ किनभने तपाईंले प्रस्तुत गरेका प्रमाण कति विश्वसनीय छन् भन्ने कुरा पाठकले ती कसले बताएका हुन् भन्ने कुराका आधारमा पनि निधो गर्छन् । स्टोरीमा जब नयाँ स्रोत उल्लेख गरिन्छ त्यति वेला झन् ख्याल गर्नुपर्छ । कुनै कुरा बताउने व्यक्तिको नाम खोल्न सकिंदैन भने त्यसको कारण बताउनुपर्छ । जस्तै, “मैले तपाईंलाई यो कुरा देखाएँ भने कम्पनीले मलाई जागिरबाट निकालिदिन्छ”, स्रोतले भन्यो ।
> कसैको भनाइ जस्ताको तस्तै राख्न सकिंदैन र त्यसको सार खिच्नु प¥यो भने उसको भनाइ बंग्याउनुहुँदैन । बताउने मान्छेले जुन अर्थ र जुन शैलीमा भनेको छ त्यही अर्थ र शैलीमा राख्नुपर्छ । प्रवक्ताले ‘हामीसँग बजेट छैन’ भनेको छ भने त्यसलाई यसरी लेख्न हुँदैनः ‘सो कम्पनी यस काममा खर्च गर्न तयार छैन भनी प्रवक्ताले बताए ।’ प्रवक्ताले आफ्नो वित्तीय अवस्था मात्र बताएका थिए । सार खिचिएको भनिएको वाक्यले कम्पनीको सोचाइबारे बताउँछ ।